Global Voices teny Malagasy » Atao inona ny tranonkala Community? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 18 Jolay 2019 6:27 GMT 1	 · Mpanoratra webmaster Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Raha efa manana kaonty ao amin'ity tranonkala ity ianao, midira fotsiny ao ary mamorona drafitra! Raha tsy izany, ampiasao ny endrika Hamoaka  raha handefa ny lahatsoratrao voalohany ary hamorona kaonty ho anao izahay!
Satria afaka mamoaka eto tsy misy famerena famoahana ireo mpandray anjara ato amin'ny GV, dia aza eritreretina ho misolo-tena ny Global Voices manontolo ny hevi-dahatsoratra eto. Tsy mihatra eto ireo fenitra fitsipi-pamoahana henjana mihatra amin'ny tranonkala fototra an'ny Global Voices . Avy amin'ireo mpanoratra manokana ny fomba fijery ao amin'ny lahatsoratra.
Ny sary famantarana ny Global Voices Community avy amin'i Jer Clarke  dia mifototra “Tambajotra”, sary kely namboarin'i Bybzee  avy amin'ny Tetikasa Noun .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/07/18/141557/
 endrika Hamoaka: https://community.globalvoices.org/write-a-post/
 tranonkala fototra an'ny Global Voices: https://globalvoices.org
 Jer Clarke: http://jerclarke.org/
 Tetikasa Noun: http://www.thenounproject.com